Nhau - Nei kurongedza kwekuzora kuchinetsa kudzokororazve?
Parizvino, chete 14% yepurasitiki yekurongedza pasirese inodzokororwa-chete 5% yezvinhu zvinoshandiswa zvakare nekuda kwemarara anokonzerwa nekugadzirisa uye kudzokorora maitiro. Kudzokorodza kwekunaka kavha kazhinji kunowanzoomera. Wingstrand anotsanangura kuti: “Mapurasitiki mazhinji akagadzirwa nezvinhu zvakavhenganiswa, saka zvakaoma kuadzokorora.” Pombi musoro ndeimwe yemienzaniso yakajairika, kazhinji inogadzirwa nemapurasitiki nealuminium matsime. "Mamwe mapakeji madiki zvekuti hautore zvinhu zvinobatsira."
Arnaud Meysselle, director director weREN Clean Skincare, akataura kuti makambani erunako anonetseka kuwana mhinduro yakakodzera nekuti zvivakwa zvekushandura zvinhu zvinosiyana zvakanyanya pasi rese. "Zvinosuruvarisa, kunyangwe kana kurongedza kwacho kuchikwaniswazve kushandiswazve, zvirinani kuti ingori 50% ingangodaro ichishandiswazve," akadaro muhurukuro yeZoom nesu muLondon. Naizvozvo, kutariswa kwechiratidzo kwachinja kubva pakurongedza kunogadziriswazve kuenda kupurasitiki zvakare. "Zvirinani kwete kugadzira virgin virgin."
Tataura izvozvo, REN Yakachena Skincare yakave yekutanga ganda rekuchengetedza mhando yekushandisa Infinity Recycling tekinoroji kune yayo siginecha chigadzirwa Evercalm Global Dziviriro Zuva Cream, zvinoreva kuti kurongedza kunogona kudzokororwa kugadziriswazve nekupisa nekutsimbirira. "Iyi mapurasitiki ine 95% zvigadzirwa zvekare, uye magadzirirwo ayo uye hunhu hazvina kumbosiyana nemapurasitiki emhandara," akatsanangura Meysselle "Chinokosha ndechekuti inogona kugadziriswa zvakare nekusingaperi." Parizvino, mapurasitiki mazhinji anogona kungodzokororwa kamwe kana kaviri.
Ehezve, matekinoroji akadai se "Infinity Recycling" achiri kuda kurongedza kuti apinde munzvimbo dzakakodzera kuti dzishandisike zvechokwadi. Mhando dzakadai saKiehl dzinotora danho rekutakura mumapaketi kuburikidza ne - chitoro marara zvirongwa. "Nekuda kwerutsigiro rwevatengi vedu, tadzokorodza mapaundi echigadzirwa anosvika mamirioni gumi nemaviri kubva mugore ra2009. Takazvipira kudzokororazve mamwe mapakeji miriyoni gumi nerimwe muna2025," akadaro director weKiehl wepasi rose Leonardo Chavez mune email kubva kuNew York.
Shanduko diki muhupenyu dzinogona zvakare kubatsira kugadzirisa dambudziko rekushandisazve, sekumisikidza marara ekudzokesa mugaba. "Kazhinji, panongova nemarara imwe chete muchimbuzi, saka munhu wese anoisa marara ese pamwechete," akadaro Meysselle. "Tinofunga kuti zvakakosha kukurudzira munhu wese kuti ashandise zvekare mumba yekugezera."
Zvizorwa Poda Container Ine Sifter, Zvizorwa Cream Midziyo, Cream zvirongo zvizorwa kavha, Zvizorwa Cream chirongo, Nhema Bhodhoro Gel Polish, Ziso Cream Jar,